Pakistana: Namoaka Fialantsiny Tamin-dranomaso Tao Amin’ny Facebook Ilay Mpitory Fivavahana Malaza Raha Nampangaina Ho Niteny Ratsy Ny Fivavahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2014 9:34 GMT
Dikasary azo tamin'ny fialantsiny tao amin'ny Facebook, navoakan'i Junaid Jamshed. Avy tamin'ny pejy Facebook-ny.
Namoaka lahatsary fialantsiny tamin-dranomaso tao amin'ny Facebook i Junaid Jamshed, mpitory fivavahana malaza ao amin'ny fahitalavitra any Pakistana, taorian'ny niampangàn'ny vondrom-pivavahana tao amin'ny Aterineto azy ho niteny ratsy fivavahana tamin'ny tsy nanasiany hasina olona iray hajain'ny Silamo, i Aisha vadin'ny Mpaminany Mohammed, tamin'ny toriteny iray tamin'ny fahitalavitra.
Any Pakistana, matetika atao amin'ireo olom-bitsy ireo fiampangàna fanivaivàna ara-pinoana ary tena raisina ho zava-dehibe tokoa, tsy avy amin'ny lalàna ihany, fa amin'ireo olona vonona lalandava ny hanao fitsaràna avy amin'ny tenany ihany koa.
Ny taona 2011, novonoin‘ny mpiambina azy ny Governoran'ny Punjab, Salman Taseer, taorian'ny fanehoan-kevitra nataony, niaro vehivavy Kristiana iray nampangàina ho niteny ratsy fivavahana ka lasa voampanga tsy rariny ho nanivaiva ara-pinoana. Notoraham-boninkazo ilay namono azy raha niala ny fitsaràna. Ny volana lasa teo, nandoro nahafaty mpivady Kristiana ny fokonolona, taorian'ny niampangàn'ny mpitondra fivavahana teo an-toerana azy ireo ho niteny ratsy ny fivavahana. Olona efapolo no voaisa ho nanao ny famonoana azy. Ny herinandro lasa teo, voaheloky ny fitsaràna hifonja 26 taona an-tranomaizina ny tompon'ilay vondrona media lehibe indrindra ao Pakistana, noho ny fitenenan-dratsy ny fivavahana, niaraka taminà vehivavy iray mpilalao sarimihetsika ary mpanentana iray ao amin'ny fahitalavitra.
Anisan'ny olo-malaza indrindra ary narahana be tany Pakistana tany amin'ny andian-taona 1980 i Junaid Jamshed. Nialàny ny asa maha-mpihira azy 17 taona lasa izay mba hampielezany ny finoana Silamo. Miseho matetika mitory teny amin'ireo fandaharana fivavahana izy, mitanisa ny Kôrany ary midera ny Mpaminany Mohammed. Manana fivarotana akanjo antsinjarany mandeha be ihany koa izy, ary anisan'ireo tomponà tambajotra fivarotana hena Halal.
Tao anatin'ilay lahatsary iray minitra, tamin'ny toriteny tao amin'ny fahitalavitra nambarafa nataon ary nahatonga resabe, nitantara tantara an-tsary momba an'i Aisha vadin'ny Mpaminany nody nanao marary mba hisintonana ny sain'ny vadiny, i Jamshed. Notohizany ihany hoe, “Izany no manamarina fa na dia miaraka amin'ny Mpaminany aza, tsy afaka miova ny natioran'ny vehivavy. Tsy afaka miova ny vehivavy, noho izany, aza miezaka ny hanova azy akory. Mijoro aminà ranjo bingo izy, raha tsindrinao mafy loatra, ho tapaka io.”
Nalain'ny vondrona maro ho azy ireo ilay lahatsary tamin'ny Aterineto; ny iray amin'izy ireo aza moa nangataka azy tsy ho afaka miditra any amin'ny toeram-pivavahana silamo intsony. Mandika ny ampahany amin’ny toriteniny ito bilaogy iray ito.
Mibitsika izao i Maheen Usmani, Pakistane mpanao gazety :
Raha ny tena foto-keviny, tao amin'ny tanjony isanandro amin'ny fankahalam-behivavy i #JunaidJamshed, fa tamin'ity indray mitoraka ity, tsy nofidiany tsara ny olona tiany asiana, sahirana tamin'ny fanaovana feon'ny akoho manatody ve izy.
Maneho hevitra i Haroun Rashid, mpandraharaha:
Izao no atao hoe mandrra mitsilany ka voan'ny nataony ihany. #JunaidJamshed
Mety ho toy ny fankahalàna vehivavy ny fanamarihan'i Jamshed, fa amin'ny vondrona Silamo sasany, ny tsy fanajàna ireo olona hajain'ny finoana Silamo, tafiditra amin'izany ireo zanaka vavy sy ireo vadin'ny Mpaminany, dia heverina ho toy ny fitenenana ratsy ny fivavahany.
Ao amin'ny vohikala Quranalyze, manoratra izao ny mpitoraka bilaogy Mo Waseem:
Na ohatra aza ny nolazain'i Junaid Jamshed momba an'i Hazrat Ayesha ka toy ny andrana famonoana olo-malaza, tsy dia itako loatra hoe ahoana izany no fitenenan-dratsy ny fivavahana miohatra amin'ny famonoana olona ataon'ny ISIS amin'ny anaran'ny Silamo, ary nahoana no tsy nitodika tany no niantefàn'ny fahatafintohinana.
Tao anatin'ny ora valo, nojerena maherin'ny in-600.000 isa ary nozaraina olona maherin'ny 50.000 tao amin'ny Facebook ny fialantsinin'i Jamshed. Ity ny fandikàna ny fialantsininy:
Rahalahy hajaina, namana, ireo zoky sy anabavy. Nisy fotoana, nandritra ny toriteny, noho ny hadalàko sy ny tsy fahalalàko, nilaza fitsaràna tena tsy mitombina aho, izay tena nanohintohina tanteraka ny fahamasinan'ny Olo-manankaja Aisha. Hadisoako izany, ary noho ny tsy fahalalàko izany hadisoana izany. Noho ny tsy fahampian'ny fahaizako izany, tsy olona tampom-pahaizana aho. Tsy olona manam-pahaizana manokana momba ny lalàna. Ary miaiky ny hadisoako eo anatrehan'ny fiarahamonina Silamo manontolo aho, sy mitalaho ny famelànareo. Ary amin'ny foko marina, mangataka an'Andriamanitra aho mba hamela ahy, ary manambatra ny tanako manoloana anareo aho sy mitalaho ny famelànareo ahy ihany koa. Diso aho ary miaiky sy miala tsiny amin'ny hadisoako.
Fanehoan-kevitra maro tamin'ilay lahatsary no nanaiky ny fialantsininy ary niantso ny hafa mba hamela azy.
Ny hafa, sahala amin'i Mo Waseem, dia nampivoitra ny mizana tsindran'ila sy tsy rariny momba ny lalàna mikasika ny fitenenan-dratsy ny fivavahana any Pakistana:
Tsy mila lazaina intsony hoe mankasitraka ireo Silamo mamela azy aho, mieritreritra aho fa mahatonga zavatra ratsy bebe kokoa io fisainana miandàny io, satria mahatonga ny fisianà fenitra roa io no sady mampisy fihatsarambelatsihy! Manontany tena aho, nahoana ary ireo olona izay avy amin'ireo vondrona vitsy an'isa any Pakistana no tsy omena tombony mitovy amin'izany koa, fahazoana fisalasalàna mitovy rehefa ampangaina ho niteny ratsy ny fivavahana? nahoana izy ireo no tsy omena ny fahafahana miala tsiny noho ny “hadisoany”, hadisoana mety ho nataony na tsia? Nahoana ny fanjakàna no tsy manaiky hoe entina bebe kokoa handaminana adin'olona ary fitsaratsaràm-poana ireo lalàna manohitra ny fitenenan-dratsy ny fivavahana ireo? Inona no zavatra miseho any amin'ny Fiadidiana Foiben'ny Kôrany any no tsy mitsangana hisian'ny fitsaràna tsy miangatra, na dia manohitohina ny tenantsika aza izany, ny fianakaviantsika (Kôrano 4:135)?
Namerina ny teny i Maheen Usmani:
Raha i #JunaidJamshed amin'ny fahaizany betsaka sy ny fitoriany nandritra ny 17 taona aza afaka avela heloka noho ny #fitenenandratsynyfivavahana, nahoana no tsy afaka atao izany koa ilay Kristiana #AasiaBibi?
Ny sasany indray naneho ny ahiahiny momba ireo mpiasa izay mitantana ireo fivarotana am-polony manerana ny firenena, mivarotra ilay akanjo malaza an'i Junaid Jamshed. Mpampiasa Twitter iray no nandefa sarinà fivarotana mikatona nisy famantarana nitanisa ny fialantsininy:
Mitenena hoe “manao ahoana” amin'i JJ #JunaidJamshed Fiarahabàna JAe
Emmad Hameed, mpanao gazety ara-panatanjahan-tena, naneho hevitra tamin'ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook:
Mety handentika mafimafy kokoa antsika izay dona rehetra manjo an'i JJ, ahoana ny hevitrareo amin'ny fanafoanana miaraka an'ilay lalànan'ny fitenenan-dratsy fivavahana io…Ahoana ny hevitrareo raha lalaovina amim-pieritreretana tsara io karatra io amin'izao, ary terena indray mandeha any ireo Jahil Maulvis (mpitory tsy mahay) ireo mba hanàla ilay lalàna…Mety ho vintana ahafahana manajanona io $%&* mandrakizay io!
13 ora izayIndia